သက်ဝေ: October 2012
Posted by သက်ဝေ at 3:10 PM 19 comments:
မြန်မာမိသားစုတွေမှာ ကလေးကို စကား စပြောတဲ့အချိန်မှာ မြန်မာလိုသာ သင်ဖြစ် ပြောဖြစ်ကြတာ သဘာဝပါ။ ဒါပေမယ့် ရေကြည်ရာ မြက်နုရာ ဆိုသလိုပဲ တခြားနိုင်ငံတွေမှာ ရောက်နေတဲ့ မိသားစုတွေထဲက ကလေးငယ်တွေ ကျောင်းစတက်တဲ့အခါမှာတော့ ကလေးကို ဘယ်ဆရာမကမှ ဘယ်သူငယ်ချင်းကမှ မြန်မာလို လာပြောနေမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီအတွက် မိဘတွေအနေနဲ့ ကိုယ့် ကလေးကို ကျောင်းမနေခင်အချိန် အိမ်မှာ ဒီလို small talk လေးတွေ တလုံးစ နှစ်လုံးစ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ပြောဆိုကြရင်း သူတို့လေးတွေ ကျောင်းမှာ၊ အတန်းထဲမှာ ဆရာမပြောတဲ့ စကား၊ ကလေးအချင်းချင်း ပြောဆိုကြတဲ့ နေ့စဉ်သုံး စကားလေးတွေကို စိမ်းမနေစေဖို့ ရည်ရွယ်ပြီး ဒီပိုစ့်ကို ရေးပါတယ်…။
Pain Pain – ဒါကတော့ စင်္ကာပူမှာ သုံးကြတဲ့ ကလေးစကားပါ… ရယ်စရာလေးနော်…။ တခုခု ထိခိုက်ဒါဏ်ရာရသွားရင် နာသွားလား သို့မဟုတ် နာနေတယ်ဆိုတာကို ပြောတာပါ။ သူငယ်ချင်းတယောက် သူ့သမီးက လက်ကလေး နာနေတာကို Mummy... Pain Pain… လို့ လာပြောတော့ တရုတ်လိုပြောတာလား ထင်ပြီး ဘာမှန်းမသိ ဖြစ်နေတာ တွေ့ဖူးပါတယ်…။ Pain here, Pain there ဆိုတဲ့ စကားမျိုးလည်း ပြောတတ်ကြပါသေးတယ်… ဟိုနားက နာ ဒီနားက နာ ပေါ့လေ…။
ဒါတွေကတော့ ကလေးတွေကို ထမင်းစားချိန် မုန့်စားချိန်တွေမှာ ဆရာမတွေက ပြောလေ့ရှိတဲ့ စကားတွေပါ။
Eat your own food - ကိုယ့်ပန်းကန်ထဲကဟာကို ကိုယ်စားဖို့
Chew properly - စားစရာကို ကောင်းကောင်း ဝါးစားဖို့
Eat little by little - ပါးစပ်ထဲ ပလုတ်ပလောင်း မစားဖို့
Some more please - မဝသေးရင် ထပ်တောင်းဖို့
Finish it up - ကုန်အောင်စားဖို့
Don’t waste foods - မလိုအပ်ပဲ သူများ some more ဆို ကိုယ်လည်း some more လို့ ထပ်တောင်းတတ်တဲ့ ကလေးတွေ တွေ့ဖူးတယ်။ ပြီးတော့ တကယ်တမ်းမှာ စားလို့ မကုန်တော့ဘူး… တခါ နှစ်ခါတော့ ဆရာမတွေက ဘာမှမပြောဘူး သိပ်များလာရင်တော့ အဲလို ပြောတတ်တယ်…
No sharing - တချို့ကျောင်းတွေမှာ ကလေးတွေအတွက် အိမ်ကနေ မုန့်ထည့်ပေးရတတ်ပါတယ်…။ အဲဒီအခါမှာ တယောက်နဲ့ တယောက်ပါလာကြတဲ့ မုန့်အမျိုးအမည်တွေ မတူကြတဲ့အခါ လဲစားတာတို့ လုစားတာတို့ ဖြစ်လာတတ်တယ်။ ပြီးတော့ ရန်ဖြစ်ကြ ငိုကြယိုကြပေါ့။ ဒီအတွက် ဆရာမတွေက အစထဲက ကိုယ့်ဟာကိုယ် စားကြဖို့ သတိပေးတတ်ကြတယ်။ စကာင်္ပူက ကျောင်းအများစုကတော့ အဲဒီလို မုန့်ယူသွားစရာ မလိုဘူး ကလေးအားလုံး ကျောင်းက ကျွေးတာပဲစားကြရတယ်…။
Tummy full - စားလို့ ဝသွားပြီ
Wipe your mouth - စားနေရင်း ပါးစပ်ပေနေရင်
Wash your hand - စားပြီးရင် လက်ဆေး
Wash your mouth - စားပြီးရင် ပါးစပ်ဆေး
Play time - ထမင်းစားပြီးရင် ကစားကွင်းကို ဆင်းကစားကြတော့မယ်…
အဲဒီအခါမှာ ဆရာမတွေက ကလေးတွေကို စည်းကမ်းတကျ သွားဖို့ သင်ပေးရတယ်...။
Line up - တန်းစီ…
One by One - တယောက်ချင်းစီ သွားမယ်
Two by two - နှစ်ယောက် တတွဲသွားမယ်
Be my partner - သားလေးက ပြန်ပြောပြတာ… ဆရာမက two by two line up လုပ်ဆိုတော့ သူက Partner ရှာနေတုန်း ကောင်မလေး တယောက်က Be my partner လို့ ပြောပြီး သူ့လက်ကို လာတွဲတာတဲ့… (မိခင်ဖြစ်သူ ရင်ခံသွားပြီး ထမင်း မစားနိုင်တဲ့ နေ့ပေါ့…)
Keep quiet - စကားများနေလို့ ပြောတာ
Quiet please - တိတ်တိတ်နေကြ…
ဒါတွေကတော့ ကစားကွင်းမှာ ဆရာမတွေက ကလေးတွေကို ထိန်းရင်း တတွတ်တွတ် ပြောနေကြတဲ့ စကားမျိုးတွေ…
Be careful / Careful baby
Beagood boy / Beagood girl
Sit side by side/ put side by side
Oh.. you are so smart
Bravo… စသဖြင့် ချီးကျူးဖို့ မမေ့နဲ့အုံးနော်…
ကလေးတန်းလေးတွေမှာ Show & tell နဲ့ Speech & Drama ဆိုတဲ့ အစီအစဉ်လေးတွေရှိတယ်…
Show & tell ကတော့ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ ပစ္စည်းလေးတခုခုကို ကျောင်းကိုယူလာပြီး အဲဒီပစ္စည်းလေးအကြောင်း စီကာပတ်ကုံး ပြောပြကြရတာ… သားလေးက သူ သုံးနှစ်သားတုန်းက သင်္ကြန်မှာ သူတပ်ခဲ့ရတဲ့ နေကာမျက်မှန်အမည်းလေး ယူသွားပြီး မျက်မှန်လေးအကြောင်းရော မြန်မာသင်္ကြန်အကြောင်းရော ပြောပြလိုက်တယ်လေ…။ သူဘယ်လိုပြောတယ်ဆိုတာ ကိုယ်နားမထောင်ရ မကြားရပေမယ့် သူ့အတန်းဆရာမက သားလေး စကားပြော ကောင်းကြောင်း တွေ့တိုင်း တဖွဖွ ပြောနေတော့တာပဲ…။
Speech & Drama ကတော့ တေးသရုပ်ဖေါ်လို Play တွေလို သရုပ်ဆောင်ရတာမျိုးပေါ့…။ အဲလို အချိန်တွေမှာ ကလေးတွေ သိပ်ပျော်ကြတယ်…။ သဏ္ဍာန်လုပ် သရုပ်တူ ဆိုသလို လှုပ်ရှား ကခုန်ရင်း မမောနိုင် မပမ်းနိုင်…။
Stand at the corner - ဆိုတာကတော့ ကလေးတွေကို ပြောစကား နားမထောင်ရင် အပြစ်ပေးတာပါ…။ အခန်းထောင့် နံရံကို မျက်နှာမူလို့ ၁၀ မိနစ်ဖြစ်စေ ၁၅ မိနစ်ဖြစ်စေ မတ်တပ်ရပ်နေခိုင်းတာမျိုးပါ…
ကျောင်းက ပြန်လာတဲ့ ကလေးတွေကို ဆီးကြိုနှုတ်ဆက်စရာ စကားလေးတွေ…
How’s your school day?
How’s your meal?
ဒါလေးတွေကတော့ နေ့စဉ်သုံး စကား လွယ်လွယ်လေးတွေပါ…
Put your cap
Take out your shoes
Put back your shoes
Tie your shoelace
Clap your hand…
Oh you are yawning…
How about me..?
Pass it to him / Pass it to me..
Don’t push me/ him
Don’t push the chair
Let’s eat out…
ကိုယ်မှတ်မိသလောက် Small Talk လေးတွေ ရေးထားပါတယ်…။ ကလေးငယ်လေးတွေ ရှိတဲ့ မိဘတွေအတွက် အနည်းနဲ့ အများတော့ အသုံးဝင်လိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်…။
မှတ်ချက် - ဒီပိုစ့်ကို ရေးဖြစ်အောင် တိုက်တွန်းခဲ့တဲ့ စာရေးဖေါ် ကိုသီဟသစ် (အားမန်သစ်) ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဒီတပတ်ထွက်တဲ့ ကလေးဂျာနယ်မှာ ဖေါ်ပြပြီး ဖြစ်ပါတယ်…။
Posted by သက်ဝေ at 5:20 PM 8 comments: